KITS aquarium kacha mma maka ndị mbido, olee nke ị ga -ahọrọ? | Nke azụ
Akwarium zuru ezu
Natalia Cerezo | 27/08/2021 15:38 | Ngwa
Ngwa akwarium zuru oke dị mma ịmalite, ya bụ, maka ndị na -akwado ụwa azụ na akwarium chọrọ ịmalite inwe akwarium nke ha. Maka ọnụahịa ezi uche dị na ya, ngwa ndị ahụ gụnyere usoro ihe ga -eme ka ndụ gị dị mfe ma meghee ụzọ gị iji nweta akwarium zuru oke.
N'isiokwu a na akwarium zuru ezu, anyị ga -ahụ onye a na -achọ maka akwarium ndị a, ihe ha na -etinyekarị na ụdị ha dị iche iche, n'etiti ndị ọzọ. Tụkwasị na nke a, anyị na -akwadokwa ka ị gụọ akụkọ ndị ọzọ gbasara akụkọ a temometa nke akwarium, ihe ọzọ bara ezigbo uru (na ọnụ ala) iji hụ na azụ gị nwere ahụ ike.
1 Ngwa akụrụngwa kacha mma iji malite
2 Kedu ndị akpa akwarium ezubere maka?
3 Kedu ihe kwesịrị ịnweta ngwa akwarium
3.2 Ibe ọkụ LED
3.3 Mmiri ọkụ
4 Ụdị ngwa ngwa akwarium
4.2 40 lita
4.3 60 lita
4.4 100 lita
4.5 Na kabinet
5 Otu esi agbakọ ole azụ ga -adaba na akwarium
5.1 Nha azụ
5.2 Mmekọahụ azụ
5.3 Osisi na ngwa
6 Ebe ị ga -azụta ngwongwo akwarium zuru oke na -ere
Ngwa akụrụngwa kacha mma iji malite
Ndidi - Aquarius nke ...
Marina 15256 - Kit nke ...
Tetra Starter Line Ikanam ...
Sistemụ FZONE maka ...
Tetra Aquarius Tetra ...
Kedu ndị akpa akwarium ezubere maka?
Ngwa akuku akwarium zuru oke dị mma ịmalite, ọ bụ ya mere eji eme ya maka ndị na -anụ ọkụ azụ na -anọbeghị ogologo oge. na ha chọrọ ngwaahịa nke gụnyere ngwa ọrụ niile dị mkpa iji bido.
Dị ka anyị ga -ahụ n'okpuru, ngwa na -agụnyekarị usoro ihe ndị bụ isiAgbanyeghị, dabere na ịdị mma (na ọnụ ahịa) nke akwarium, ngwaọrụ ndị a nwere ike bụrụ ihe dị mfe ma dị mfe ma ọ bụ tinye ihe ọzọ, dị ka ịchọ mma, arịa ụlọ ...
Ihe dị mma gbasara ịhọrọ ngwa mgbe ịmalite na ntụrụndụ ọhụrụ a na -atọ ụtọ bụ na ọ bụghị naanị na anyị ga -enwe isi ihe ịmalite, mana ka oge na -aga, anyị nwere ike họrọ imezi ihe ndị ahụ anyị na -ahọrọ na akwarium anyị n'enweghi ike itinye nnukwu ego dị otú ahụ.
Kedu ihe kwesịrị ịnweta ngwa akwarium
Ngwa akwarium nwere ike ịgụnye ọtụtụ ihe, mana Kacha mkpa (na ihe ị ga -akpachapụ anya maka kacha mma) bụ ihe ndị a:
Ihe kachasị mkpa nke akwarium (ma e wezụga azụ, n'ezie) bụ ihe nzacha. N'ikwu okwu sara mbara, ọ bụ ihe dị iche na akwarium na tankị azụ, ebe ọ bụ na n'ime ndị a ị ga -agbanwe mmiri kpamkpam, ebe ihe nzacha bụ maka ihicha ya ka ọ weghachi ya na akwarium. Maka nke a, ọ na -eji, na mgbakwunye na igwe, ihe dị ka eriri aki oyibo, carbon ma ọ bụ perlon, ihe yiri owu nke anyị kwuru maka ụbọchị ole na ole gara aga.
Ihe nzacha nwere ụdị abụọ: ime ụlọ, nke a na -emikpu n'ime akwarium, egosiri maka obere akwarium ma ọ bụ ọkara, na mpụga, egosiri maka nnukwu akwarium.
Ibe ọkụ LED
N'oge gara aga, a na -eji ọkụ ọkụ halide na -enwu ọkụ nke akwarium Ruo oge ụfọdụ, a họrọla ọtụtụ ihe maka LEDỌbụghị naanị maka na ha dị oke mma, ha na -enwu ọkụ nke ọtụtụ agba na ha dị oke mma, kamakwa n'ihi na ha na -arụ ọrụ nke ọma ma na -emepụta obere ọkụ, ihe azụ gị ga -enwe ekele.
Na ụkpụrụ, ọkụ bụ ihe dị mma na akwarium gị, n'agbanyeghị na ọ bụrụ na ị nwere osisi (ya bụ, akwarium a kụrụ) ihe na -agbanwe, ebe ọ bụ na ọkụ dị mkpa maka osisi iji photosynthesize.
Ngwa akụrụngwa akwarium zuru oke gụnyere igwe na -ekpo ọkụ mmiri, ngwaọrụ nke na -emezu aha ya na nke ahụ Ọ bụ ya kpatara ikpo mmiri ọkụ ka ọ dị na okpomọkụ ị chọrọ . Ndị na -ekpo ọkụ na -aba uru karịsịa ma ọ bụrụ na ị bi na ihu igwe oyi ma ọ bụ ọ bụrụ na ị nwere akwarium azụ ebe okpomọkụ.
Ụdị ngwa ngwa akwarium
A bịa n'ịzụta ngwa akwarium, ikekwe ajụjụ mbụ na -ebilite anyị bụ azụ ole ka anyị nwere n'ime akwarium, ajụjụ dị mgbagwoju anya karịa ka ọ dị (na ngalaba na -esote anyị ga -anwa ịza ya nkenke). Na -eso ya ụdị ngwa, nke kachasị dị ka ndị a:
Akwarium kacha nta, na -enwekarị ohere maka azụ ole na ole na ụfọdụ osisi. Ha mara ezigbo mma, ebe ọ bụ na ha na -enwe ọmarịcha ọdịdị. Ebe oke mmiri ya pere mpe, ngwa (ọkachasị mgbapụta na ihe nzacha) na -abanye n'ime akwarium, yabụ na -ewerekwa obere oghere.
Akwarium dịtụ ntakịrị, n'agbanyeghị na ọ ka dị n'ime obere oghere. Iji chọpụta ọnụọgụ azụ ị nwere ike dabara, ị ga -agbakọọ osisi, gravel na ihe ịchọ mma ole ị ga -eji, yana nkezi nke azụ mgbe ha toro. Nọmalị, ngụkọta oge bụ maka azụ ise, ọ bụ ezie na ngụkọta oge nwere ike ịdị iche dabere na nha azụ. Ebe ọ bụ na ọ baghị nnukwu ibu, aquariums ndị a gụnyere ihe nzacha, yana ikekwe ngwa ndị ọzọ, n'ime.
Nchọpụta Tetra AquaArt ...
N'ime oke akwarium anyị na -ahụ ndị nke lita 60, nke bụ n'ezie ha bụ nhọrọ kacha mma ịmalite. Obere mmiri buru ibu na -esiri ike ijikwa, kpomkwem n'ihi nha ha, n'aka nke ọzọ, otu n'ime lita 60 nwere ego zuru oke iji bido gị, ebe ọ baghị nnukwu ma ọ bụ pere mpe. Akwarium ndị a na -ebukarị ihe dị ka azụ 8.
Enwere ụfọdụ nhọrọ dị mma nke ahụ gụnye ihe niile ị chọrọ. Dị ka ọ dị na obere akwarium, a na -etinyekarị ha na akwarium. Ụfọdụ na -etinyekwa ọkụ ehihie na abalị ka i wee nye ezi ọkụ maka azụ na osisi gị.
Akkua Complete Aquarium ...
A nke ukwu ibu, nke ihe dị ka azụ iri na abụọ nwere ike dabara, n'agbanyeghị, dị ka oge niile, ọ ga -adabere nha anụmanụ, oghere nke ngwa ... Akwarium ndị a anaghịzị elekwasị anya na ndị mbido, mana eburu n'uche nke ebido. Ngwa ndị ahụ, dị ka ihe nzacha, anaghị arụnye ya, mgbe ụfọdụ ha na -anọkwa na mpụga, akara ọhụrụ na ọ dịghị onye ọ bụla.
Marina - Akwarium akụrụngwa ...
Akwarium na arịa ụlọ, Na mgbakwunye na ịbụ otu n'ime ihe kachasị ọnụ na ndepụta ahụ, ha gụnyere otu arịa ụlọ dabara na nha nke akwarium.. Ihe na -atọ ụtọ n'ezie banyere ụdị ndị a bụ na n'ime arịa ụlọ ị nwere ike nweta ngwa niile ịchọrọ, na mgbakwunye, enwere ndị gụnyere sistemụ mmụba mberede na ihe niile. Obi abụọ adịghị ya, ụzọ kachasị mma na nke kachasị mma iji nweta akwarium gị.
Akwarium mmiri Ha kacha sie ike idobe, ebe ọ bụ na ha bụ azụ dị nro, ị ga -enwerịrị mmiri kwụsiri ike, ma ọ bụ usoro ihe niile dị ndụ nwere ike mebie. N'agbanyeghị nke ahụ, ha kacha mara mma ma dịkwa egwu. Nke ahụ kwuru, enwere ngwa akwarium mmiri na -enye gị ngwaọrụ mbụ ị ga -achọ iji kpọkọta ya, dị ka sistemụ nzacha na ọbụna dimmer nke edoziri nke ọma.
Akwarium ndị dị ọnụ ala nwere ihe abụọ jikọrọ ọnụ: ha nwere obere olu mmiri ma bụrụ ezigbo mmiri. Ọ bụrụ na ịchọghị ime ka ndụ gị sie ike nke ukwuu na ị ga -enwe naanị azụ abụọ, ndị a bụ ezigbo ngwọta. Naanị ị ga -agba mbọ hụ na ha nwere sistemụ nzacha dị mma ma debe ha ọcha. N'ezie, ọ bụrụ na ahụhụ ahụ ata gị ma ịchọrọ ịzụta azụ, ị ga -achọ nnukwu akwarium.
Otu esi agbakọ ole azụ ga -adaba na akwarium
Mgbe ọ na-abịa ịgbakọ ole azụ ga -adaba na akwarium gị, iwu a na -ahụkarị bụ na otu sentimita nke azụ na -adabara na lita mmiri ọ bụla. Ọ bụ ya mere ị ga -eji mee usoro mgbako dabere na ndị a:
Ndammana, nha azụ bụ ihe mbụ ị ga -eburu n'uche mgbe ị na -agbakọ ole ga -adaba na akwarium. Na -eme ngụkọ oge niile dabere na oke okenye azụ ga -eru (ọtụtụ oge, mgbe ịzụrụ ha, ha ka bụ nwata ma ha etochabeghị. Ọzọkwa, dabere n'ụdị mmiri ị ga -enwe ike itinye karịa ma ọ bụ dị obere azụ. Dịka ọmụmaatụ, n'ime akwarium mmiri oke bụ otu lita mmiri maka sentimita ọ bụla azụ na -atụ, ebe maka mmiri dị ọcha ọ bụ ọkara, sentimita 0,5 maka lita mmiri ọ bụla.
Ihe kpatara ya di mfe: ọ bụrụ na ị nwere azụ nwoke na nwanyị, wee hapụ ha ka ha nwere onwe ha, ha ga -amụba, na ihe n'ime obere oge, ị ga -enwe akwarium ruo n'ọnụ ya. Ọtụtụ azụ nwere ike iduga ọ bụghị naanị obere ohere igwu mmiri, nke nwere ike ibute ọgụ mpaghara, kamakwa ịbawanye nsị (dị ka poop) nke nzacha ahụ enweghị ike ịmị, nke nwere ike imetụta ịdị mma mmiri na, n'ihi ya, ahụike nke azụ gị.
Osisi na ngwa
N'ikpeazụ, osisi na ngwa (dị ka ihe oyiyi) nke ị ga -etinye n'ime akwarium ga -arụkwa otu ihe mgbe ị na -agbakọ ole azụ ga -adaba na akwarium gị, n'ihi na ha ga -ewepụta ohere (na -ahapụ obere ohere igwu mmiri) ma nwee ike mepụta ihe mkpofu (opekata mpe osisi ndụ). Otu ihe ahụ na -eme na gravel dị na ala, ị ga -agbakọọ olu ole ha nwere iji mee ngụkọ ikpeazụ.
Ebe ị ga -azụta ngwongwo akwarium zuru oke na -ere
Ị nwere ike ịchọta ngwa akwarium zuru ezu, na -ere ma ọ bụ na ọ bụghị, n'ọtụtụ ebe. Ihe kachasị na -atụ aro bụ ndị a:
AmazonN'ihi ọnụ ọgụgụ akwarium na ọnụ ahịa dị iche iche, ikekwe ị nwere nhọrọ ị na -achọ. Na mgbakwunye, ihe ị ga -eburu n'uche bụ na ọ nwere ezigbo usoro njem, ọkachasị ma ọ bụrụ na ị buterela nhọrọ Prime, yabụ ị ga -enwe akwarium n'ụlọ n'oge ọ bụla.
En ụlọ ahịa dị ka Carrefour Enwekwara nhọrọ na -atọ ụtọ, n'agbanyeghị na ọ bụghị nke ukwuu dị ka ebe ndị ọzọ. Iji chọta onyinye kacha mma, nọrọ na nche na weebụ, ebe enwere nhọrọ ịntanetị na -atọ ụtọ yana ego kacha mma.
N'ikpeazụ, na ụlọ ahịa anụ ụlọ ọpụrụiche dị ka Kiwoko ị ga -ahụkwa ọtụtụ akwarium dị iche iche. A na -atụ aro ka ị gaa ụlọ ahịa anụ ahụ ma ọ bụrụ na ị na -azụta akwarium na nke mbụ, n'ihi na ndị na -ere ahịa ha nwere ike inye aka nke ukwuu ma ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla chọrọ azịza.
Ngwa akụrụngwa akwarium zuru oke dị mma ịmalite n'ihi na ha nwere ngwaọrụ niile dị mkpa iji kpokọta obere osimiri gị (ma ọ bụ oke osimiri). Anyị nwere olile anya na edemede a abaarala gị uru. Gwa anyị, ị zụrụ ngwa ọ bụla ka ịmalite ma ọ bụ na ị malitere ịkagbu ya? Kedu nha na ụdị ị na -akwado? Gịnị bụ ahụmịhe gị?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Azu » Ngwa » Akwarium zuru ezu
Ihe nzacha AquaClear
Onye na -akwado akwarium